Medjugorje: Ozi, ngọzi na ihe dị nsọ nwere ihe ha pụtara
Paolo Tescione	Edere ya Ọktoba 18, 2020 Ọktoba 18, 2020
OZI nke Eprel 14, 1982
Ozi nke 26 June 1983
Hụ ndị iro gị n'anya! Na-ekpe ekpere maka ha ma na-agọzi ha!
OZI D D NA 7 DECEMBA 1983
Echi ga-abụrụ gị ụbọchị ngọzi n'ezie ma ọ bụrụ na edobela oge ọ bụla nye Obi m. Hapuru m onwe gị. Gbalịa mee ka obi uto, biri na okwukwe na igbanwe obi gi.
OZI NKE FEBRUARY 1, 1984
«Ugbu a ọ na-ezo na ị na-asị:‘ Gịnị mere mmiri ozuzo nke ukwuu? Gịnị mere na ọ kwụsịghị mmiri ozuzo? Gaghị aga ụka were ụrọ niile a n’okporo ụzọ ”. Ekwula na ya ọzọ. Kpewo ekpere ka ukwuu ka Chineke nye gị mmiri ozuzo nke na-eme ka ụwa mịa mkpụrụ. Ugbu a you ghaghi ichighari ihu ngọzi Chineke: kama aghaghi ikele ya n'ekpere na ibu-ọnu.
Ozi nke 5 JULY 1984
Childrenmụaka, ụmụ m taa chọrọ m ka m gwa unu ka unu kpee ekpere tupu ọrụ ọ bụla, ma werekwa ekpere were rụchaa ọrụ unu niile. Ọ bụrụ na ị na-eme ya. Chukwu gozie gi na oru gi. N’ụbọchị ndị a, ị na-ekpe ekpere obere oge, ebe ị na-arụ ọrụ dị ukwuu. Ya mere kpee ekpere! N’ekpere, ị ga-enwere onwe gị. Daalụ maka ịza oku m!
OZI NKE AUGUST 1, 1984
Ozi nke 18 JULY 1985
Childrenmụ m, ụnụ a na m akpọku gị taa ka itinye ọtụtụ ihe dị nsọ n’ụlọ gị, onye ọ bụla kwesịrị iburu ihe a gọziri agọzi. Gọzie ihe niile; yabụ satan ga - anwa gị ọnwụnwa, maka na ị ga - enwe ihe agha dị mkpa megide Setan. Daalụ maka ịza oku m!
OZI D D NA 19 DECEMBA 1985
Ezigbo ụmụaka, taa achọrọ m ịkpọ unu ka unu hụ ndị agbata obi unu n'anya. Ọ bụrụ na ị hụrụ onye agbata obi gị n'anya, ị ga-enwe mmetụta karịa Jizọs. Karịsịa n'oge ekeresimesi, Chineke ga-enye gị nnukwu onyinye, ma ọ bụrụ na ị hapụ onwe gị nye Ya. Jizọs ga-agọzi ndị ọzọ ma gọzie ha. Daalụ maka ịza oku m!
Nke gara aga Post Gara aga post:Nraranye iji cheta ịdị nso nke Chineke na nhụjuanya gị
Next Post → Post ozo:Oziọma Taa bụ October 19, 2020 na okwu Pope Francis